बाबुराम र प्रेम आलेको त्यो बचन : एमसीसी पास हुनेमा देउवा ढुक्क !
अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) पारित गराउन सरकारले तीव्र तयारी थालेको छ । सत्ता गठबन्धनकै विरोधका बीच आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसीसी फागुन १६ भित्र पास गराउने रणनीतिका साथ सरकार अगाडि बढेको हो ।
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग समानान्तर संवादमा छन् । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने भएपछि देउवाले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।देउवाले मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बालुवाटारमा संवाद गरेका थिए भने बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका थिए । त्यस लगत्तै गृहमन्त्री खाँण ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । प्रचण्ड र ओलीसँगको छलफलमा खाँणले एमसीसीका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
खाँणले भने, ‘एमसीसीमा मुलुक ध्रुवीकृत भयो । सहमतिका साथ यसलाई पास गरौं भनेर मैले भनेँ । आजको छलफल यी विषयमा थियो ।’ तर छलफल परिणाममुखी नभएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनमै एमसीसीका पक्षमा बहुमत जुट्ने आश मारेका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसीको पक्षमा बहुमत जुटाउन सहयोग गर्ने देउवाको अपेक्षा छ ।
‘प्रधानमन्त्रीजी माधव नेपालको कुराबाट अझै अलमलेर बस्नुभएको छ । माधव नेपालले सकभर एमसीसीको पक्षमा मत दिनुहुन्छ,’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यो भएन भने पनि उहाँहरुले प्रचण्डको जस्तो एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्न ह्वीप लगाउनु हुने छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ ।’
एकीकृत समाजवादीका कम्तीमा पनि १०–११ जनाले एमसीसीको पक्ष मत दिने आँकलन देउवाको छ । प्रधानमन्त्री देउवा एकीकृत समाजवादीको भोट लिएर एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छन् ।
माधव नेपाल आफैले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी पास गर्ने वातावरण मिलाउने बचन दिएको काँग्रेस नेताको दाबी छ । काँग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘एमसीसी पास गर्ने ढंगले म वातावरण मिलाउँछु, तपाईं धेरै नआत्तिनुस् भनेर माधव नेपालले भन्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसैको भरमा हुनुहुन्छ ।’
देउवालाई आलेको बचन
अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) पारित गराउन सरकारले तीव्र तयारी थालेको छ । सत्ता गठबन्धनकै विरोधका बीच आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसीसी फागुन १६ भित्र पास गराउने रणनीतिका साथ सरकार अगाडि बढेको
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग समानान्तर संवादमा छन् । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने भएपछि देउवाले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
देउवाले मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बालुवाटारमा संवाद गरेका थिए भने बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका थिए । त्यस लगत्तै गृहमन्त्री खाँण ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । प्रचण्ड र ओलीसँगको छलफलमा खाँणले एमसीसीका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
माधवमाथि देउवाको अझै आशा
९–१० जना मन्त्रीले पनि एमसीसीको पक्षमा मत हाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई बचन दिएको पाइएको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले त मन्त्रीसहित एकीकृत समाजवादीका १० जनाभन्दा बढी सांसद एमसीसी पक्षमा उभिने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिएको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
स्रोतले भन्यो, ‘नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपालभन्दा प्रेम आलेसँग सांसद बढी देखिन्छन् । प्रेम आलेसँग १० जना सांसद होल्ड छन् ।’
पर्यटनमन्त्री आलेले आफ्नो पार्टीबाट श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, पार्वती विशुंखे, धनबहादुर बुढा, गोपाल बम, हिराचन्द्र केसी, समिना हुसेन र बिना बुढाथोकीले एमसीसीको पक्षमा मत दिने विश्वास प्रधानमन्त्री देउवालाई दिलाएका छन् ।
गत असार ३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेमा ओली निकट उनीहरुले विश्वासको मत दिएका थिए ।
यस्तै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले पनि एमसीसीको पक्षमा मत दिने संकेत दिएको पाइएको छ । काँग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘यिनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बचन दिएका छन् । त्यो हुँदा एमसीसी पास गर्न बहुमत पुग्छ । अहिलेको हिसाब किताब यही हो ।’
काँग्रेस नेताहरु अनुसार गठबन्धन भत्केको अवस्थामा माधव नेपालले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि आले फर्किने मुडमा छैनन् । आलेले प्रधानमन्त्री देउवाबाट पनि बर्खास्त नहुने गरी लबिङ गरिरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।
काँग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबाट पनि एमसीसी पारित गराउने कुरामा निर्णायक योगदान रहने विश्वास छ ।
काँग्रेसको हिसाब अनुसार जसपामा बाबुराम भट्टराई निकट १०–११ जना सांसद एमसीसी पास गर्न साथ दिने खालका छन् । सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीबारे देउवाको लाइनमा उभिएका भट्टराईले सिङ्गो जसपा नै पक्षमा उभिने बताएको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित केही सांसदले मत नदिए पनि जसपाको बहुमत पक्षले एमसीसीमा मत दिने विश्वास भट्टराईले देउवालाई दिलाएका छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १२ जना सांसद एमसीसीको पक्षमा उभिने काँग्रेसको दाबी छ ।
एमसीसी यसरी हुने छ पास–फेल
कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूका अनुसार बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हुने सहमति अनुसार एमसीसीमाथि छलफल सुरु हुनेछ । ‘बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर एमसीसीमाथि छलफलका लागि समय सीमा तोक्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक र दफाबार छलफलका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले समय तोक्छ ।’
तर, फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गराउने गरी कार्यतालिका निर्धारण हुने बडूले बताए । उनका अनुसार बिहीबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछन् ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले एमसीसीबारे आ–आफ्नो धारणा राख्ने उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीले सांसदहरुले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने छ ।
मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ ।
एमसीसी प्रक्रिया थप अगाडि बढ्न उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बहुमतले अस्वीकृत भए एमसीसी अघि बढाउने बाटो बन्द हुन्छ ।
प्रस्ताव स्वीकृत भए प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २२५ बमोजिम अगाडि बढ्ने कानुनमन्त्री बडूले बताए । त्यसपछि एमसीसीलाई फेरि मन्त्रीले सन्धिको प्रावधानमाथि छलफल गरियोस् भनि अर्को प्रस्ताव राख्न सक्छन् । उक्त प्रस्तावलाई सभामुखले ध्वनि मतबाट निर्णय गराउने उनको भनाइ छ ।
जसमा पक्षमा हुनेले ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुनेले ‘हुन्न’ भन्ने अभ्यास छ । सो क्रममा ‘हुन्छ’ भन्ने सांसदको ध्वनी ठूलो सुनियो भने प्रस्ताव पास भएको मानिन्छ भने ‘हुन्न’ भन्नेको ठूलो सुनियो भने फेल हुन्छ ।
ध्वनि मत प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेले विरोध जारी राखे मतदानमा सहभागी भएको मानिने छैन । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्दाको समयमा एमाले सांसदहरु वेल घेराउमा उत्रिए भने पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्या मात्रै गणना हुने छ ।
प्रतिनिधि सभामा कूल २ सय ७५ सांसदमध्ये हाल २७१ सांसद छन् । जस अन्तर्गत नेकपा एमालेका ९८ सांसद छन् । काँग्रेसका ६३ सांसदमध्ये २ जना निलम्बित रहेकाले हाल ६१ जनामात्र छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना छन् भने जसपाका १९ जना एक (जना निलम्बित) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १२ जना सांसद (रेशम चौधरीले पार्टी छोडेको) छन् । जसमा काँग्रेसका ६१ र लोसपाका १२ सांसद गरी एमसीसी सम्झौताको पक्षमा ७३ मत पुग्छ ।
एमसीसी संसदमा टेबल हुँदा भने लोसपा मौन बसेको थियो । तर लोसपा संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा पनि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसीसीको पक्षमा उभिने बताएका थिए ।
यता सत्ता घटक माओवादीका सभामुख बाहेक ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जनमोर्चाका १ सांसद अहिलेसम्म सम्झौताको विपक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनका ७२ सहित नेमकिपाका १, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ७५ मत विपक्षमा देखिन्छन् ।
सत्तारुढ जसपामा भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरहरू एमसीसीको पक्षमा उभिए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह मौन छ ।
भट्टराईको पक्षमा बहुमत पुगे एमसीसी पास गर्न केही सहजता छ । तर यादव पक्षमा बहुमत पुग्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया नै असफल हुन सक्छ ।